सेयर बजारमा सुधार र अनलाइन कारोबारले पनि जगाएन आशा | NewsKarobar
गृहपृष्ठ सेयर बजारमा सुधार र अनलाइन कारोबारले पनि जगाएन आशा
सेयर बजारमा सुधार र अनलाइन कारोबारले पनि जगाएन आशा
साताभरमा १५ अंकले घट्यो सेयर बजार
सेयर बजार परिसूचक साताभरमा करिब १५ अंकले घटेको छ । साताको पहिलो दिन आइतबार ११८७.७७ अंकबाट कारोबार सुरु भएको सेयर बजार साताभरमा १४.९९ अंकले घट्दै अन्तिम दिन बिहीबार ११७२.७८ अंकमा झरेको छ ।
अनलाइन कारोबारमा पनि लगानीकर्ता विश्वस्त हुन नसक्दा सेयर बजारले गति लिन नसकेको हो । अनलाइन कारोबार सुरु भएपछि बजार दुई–तीन गुणासम्म बढ्ने अपेक्षाबीच नेप्सेले उल्टो गति लिएको छ ।
नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि सुस्ताउँदै गएको छ । केही दिनयता कारोबार रकम ३० देखि ४० करोड हाराहारीमा सीमित छ । बजारमा ठूला र संस्थागत लगानीकर्ता प्रवेश नगरेका कारण नेप्सेले सकारात्मक दिशा समाउन सकेको छैन । बिहीबार पनि ३१ करोड ५४ लाखबराबरको मात्र सेयर कारोबार भएको छ ।
सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेपछि केही समयअघि अर्थ मन्त्रालयले समेत चासो राख्दै मुद्रा तथा पुँजीबजारका समस्या समाधानका लागि पहल गर्यो । मन्त्रालयले लगानीकर्ता संघ संस्थाका प्रतिनिधिसहितको समिति गठन गरी सुझाव लियो । ब्याजदर वृद्धिलाई निश्चित सीमाभित्र राख्दै मार्जिन लोनको सीमा बढाइयो । बजारलाई गति प्रदान गर्न भन्दै नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि आवश्यक सुधारका गतिविधि अगाडि सार्यो । तर पनि बजारले सकारात्मक गति लिएन ।
किन सकारात्मक बनेन बजार ?
सेयर बजार घट्नु र बढ्नु सामान्य प्रक्रिया हो । तर, अर्थमन्त्रीसमेतको सहभागितामा उद्घाटन भएको अनलाइन कारोबार अझै स्वचालित हुन नसक्दा लगानीकर्तामा उत्साह छाउन सकेको छैन । बजारप्रति अनुदार भनिएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजधानीको पाँच तारे होटलबाट अनलाइन कारोबार उद्घाटन गर्दै ‘अब नेपाली पुँजी बजार सुधार हुन्छ, आत्तिनुपर्दैन’ भन्दै गर्दा हल तालीले गुन्जिएको थियो । नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, नेप्सेका अध्यक्षलगायतले ‘अब बजार कायापलट हुन्छ’ भन्दै गर्दा पनि हलमा तालीको पर्रा छुट्यो । तर, त्यो उत्साहमा अहिले तुषारापात लागेको छ ।
बिहीबार ब्रोकर नम्बर ४७ मा सेयर कारोबारका लागि पुगेका लगानीकर्ताहरु निराश देखिन्थे । बजारले गति लिन नसक्दा उनीहरुमा अनलाइन कारोबारप्रति पनि कुनै भरोसा देखिएन । ‘अनलाइन कारोबारमात्रै भनेर हुन्छ ? पाँच तारे होटलमा उद्घाटनमात्रै गरेर हुन्छ ? अनलाइन कारोबार फङ्सनमा छ कि छैन अनुगमन मूल्यांकन गर्नु पर्दैन ?’ लगानीकर्ताहरु वातमार्दै थिए । अनलाइन कारोबार स्वचालित हुने हो भने देशको जुनसुकै भागमा पुगेका बेला पनि कारोबार हुने र विदेशबाट समेत खरिद–बिक्री गर्न सकिने हुँदा बजारमा उत्साह छाउनेमा उनीहरु विश्वस्त देखिन्थे ।
बिहीबार सामान्य घट्यो
सेयर बजार परिसूचक नेप्से बिहीबार सामान्य घटेको छ । होटल, विकास बैंक, निर्जीवन बिमा कम्पनी, उत्पादनमूलक र अन्य समूह बढे पनि बैंक, जलविद्युत, वित्त, लघुवित्त र जीवन बिमा समूह ओरालो लागेपछि समग्र बजार परिसूचक ०.२ प्रतिशतले घटेको छ । बिहीबार १६२ कम्पनीको ३१ करोड ५४ लाख रुपैयाँबराबरको ९ लाख ९२ हजार ९३० कित्ता सेयर किनबेच भयो । घटेको बजारमा पनि कालिका विकास बैंक, नागरिक लगानी कोष, फर्वड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स, तनहुँ डेभलपमेन्ट बैंकलगायत कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् ।
प्रकाशित समय १७:०५ बजे
पछिल्लाे - नक्कली प्रमाणपत्रधारी शिक्षकविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
अघिल्लाे - सगरमाथा इन्स्योरेन्स र एनसीसी बैंकबीच सम्झौता